Times Of Nepali » हृदयन्द्रलाई पारसबाट किन यस्तो गरियो ? राजपरिवारमा खैलाबैला !
03 11 19 |
हृदयन्द्रलाई पारसबाट किन यस्तो गरियो ? राजपरिवारमा खैलाबैला !
हृदयन्द्रलाई पारसबाट किन टाढा राखियो ? परिवारमा खैलाबैला !
पूर्व युवराज पारस शाहले आफू सर्वसाधारण भइसकेको भन्दै जोगीजस्तो जीवन बिताएको दाबी गरेका छन् । उनले आफूमा राजा बन्ने चाह र उद्देश्य नरहेको समेत स्पष्ट पारे । युट्युबर सोनिकासँग देखिने क्रममा उनले आफूलाई युवराज नभन्न समेत भने । पारस अनौपचारिक र सुरक्षा घेराबाट टाढा पुगिसकेका छन् । पूर्व युवराजका रुपमा सुरक्षा पनि लिएका छैनन् । पछिल्लो समय युट्युबर सोनिका रोकायासँग जोडिएर चर्चामा आएका छन् ।
आखिर किन पारस परिवारबाट टाढिए । उनले आफूखुशी जीवन बिताइरहेका छन् । राजसंस्थाप्रति सहानुभूती बढ्दै जाँदा पारस त्यसप्रति कुनै वास्ता गरिरहेका छैनन् । परिवारमा उनी छोरा हृदयन्द्र शाहबाट टाढा छन् । छोरी पूर्णिका भने पारससँग नजिक छिन् । पूर्व राजपरिवारमा पारसलाई हृदयन्द्रबाट टाढा राखिएको छ । राजावादीहरुले हृदन्द्रलाई भावी राजाका रुपमा पनि देखेका छन् । त्यसैले हिमानीले पनि हृदयन्द्रलाई पारसबाट टाढा राखेकी छिन् । पूर्व राजाले पनि हृदयन्द्रलाई पारसबाट टाढा राखेकी छिन् ।
यसैगरी युट्युबर सोनिका रोकायाको पासोमा परेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारमा खैलाबैला मच्चिएको छ । विभिन्न काण्डले बदनाम भएका पारस सोनिकासँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा आएका छन। सोनिकाका बारे पूर्व राजपरिवारमा नकारात्मक खबरहरु पुगेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चिन्तित बनेका हुन्। राजावादीहरुले समेत यसले पूर्व राजाप्रति बढ्दो समर्थनमा धक्का पुग्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । पूर्व राजा निकट स्रोतले पारस महिलासँग जोडिंदा गलत सन्देश गएको जानारी दिएका छन् । यसप्रति पूर्व राजा शाह गम्भीर भएका छन् ।
पारस यसैपति उदण्डताका कारण बदनाम भएका छन्। उनीप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा छ । उनको कारणले पूर्व राजा शाह देखि छोराछोरीहरुप्रति नकारात्मक धारणा बन्नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसमा केही पूर्व राजानिकटस्थ नै लागेका छन् ।
पारसकी पत्नी पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह समाजसेवामा सक्रिय छिन् । उनी लोकप्रीय छिन् । छोरा हृदयन्द्रलाई साथ लिएर परोपकारी काम सिकाइरहेकी छिन् ।
पारसकी छोरी पूर्णिका शाह र किर्तिका शाह पनि परोपकारी काममा लागिसकेका छन् । किर्तिकाले जन्मदिन अनाथ बालबालिकासँग मनाइन् । पूर्णिका नेपाली साहित्य रुचाउँछिन् । पारसपत्नी हिमानी र छोराछोरीहरु लोकप्रीय भइरहँदा पारसको व्यवहारले उनीहरुलाई पनि असर पर्ने हो कि भनेर पूर्व राजा चिन्तित भएको बुझिएको छ ।
श्रोत रिपोटर्स क्लब नेपाल